China New Technology Aroma Vitamin C Shower FIlter mpanamboatra sy mpamatsy | Xinpaez
Teknolojia vaovao Aroma Vitamin C Shower FIlter
Hanitra 6 AROMA - Manampy anao hiala sasatra ny vatanao reraky ny saina sy adin-tsaina
Fampivoarana ny hoditra sy ny volo - manatsara ny fahamandoana, ny fahasitranana, ny famafana ary ny fahamendrehan'ny hoditra
VITAMIN manankarena avo C. - Ny otrikaina vitamina avy amin'ny gel vitamina dia hanala ny klôro misy 99,9% ary hisy vokadratika ary hanome otrikaina amin'ny hoditrao
Sivana mahomby - esoriny amin'ny fomba mandaitra ny harafesina sy akora manimba
Dimensions: 133 * 46 MM
Shell Fitaovana: Polycarbonate (PC)
endri-javatra: Aroma Vitamina C
Shell «Transparent Metal»
Ny firesahana momba ny Filter Shell Material, ny fampitahana ny PC amin'ny ABS, ny PC no plastika mahazaka fiantraikany tsara indrindra. PC dia an'ny plastika injeniera miaraka amin'ny vidiny lafo, fa ny PC kosa manana fananana insulation elektrika tena tsara sy fananana mekanika, indrindra ny fanoherana ny fiantraikany, ny hamafiny avo, ny maripanan'ny maripana miasa (-100 ～ 130 ℃) ary ny mangarahara avo (fantatra amin'ny anarana hoe "Transparent metal"), tsy misy poizina, mora zahana sy amboarina. Tsy vitan'ny hoe manolo metaly sasany fotsiny izy io, fa koa vera, hazo sns PC tsy mahatohitra hydrolisis, fanoherana hafanana PC dia manodidina ny 130, fanoherana hafanana ABS 80 degre, tsara kokoa ny fahombiazan'ny PC amin'ny ankapobeny.
Fotsy ny hoditrao！
Ny vitamina C dia ampiasaina amin'ny sivana fandroana, satria afaka mahatohitra taratra ultraviolet amin'ny lafiny iray izy io, manatsara ny tosi-java-maizina sy freckles, ka misy vokany amin'ny fotsifotsy. Ny vokatra fikolokoloana hoditra manankarena vitamina C dia afaka manampy ny hoditra hanohitra ny taratra ultraviolet amin'ny fahavaratra, hampiroborobo ny metabolisma amin'ny hoditra, ary hisoroka ireo teboka maizina sy teboka mavo. Amin'ny ririnina dia afaka manatsara ny fahamaizan'ny fivezivezivezy ra tsy mahomby amin'ny hoditra, mba ho fotsy sy mamiratra ihany koa ianao amin'ny ririnina.
Rehefa avy nandro tamin'ity sivana ity ianao dia mahatsiaro malama ny tavanao ary mahatsiaro manjavona ny hoditrao. Ny habetsahan'ny hamandoan'ny hoditra dia hitombo aorian'ny fampiasana azy.
Sivana azo soloina
1.Misy vitamina C betsaka, 45000mg, izay voasarimakirana 800 heny '. Raha vao miditra ny rano dia hanome virtamin C. be dia be ny fanesorana klôro.
Ny vokatra 2.Moisturizing dia manome anao hoditra malefaka sy malefaka ary mando.
3. Mampihena ny adin-tsaina sy havizanana.
Ilaina ny fanesorana kôline
Ny klôro residual ao anaty rano fantsona dia avoaka avy amin'ny rivotra mandritra ny fandroana ary mijanona ao amin'ny trano fidiovana misy rivotra. Ny mandro mandritra ny folo minitra dia toy ny fisotro rano 1L. Ny zava-misy dia ny habetsaky ny klôro voatsentsitra avy amin'ny rivotra mandritra ny fandroana dia betsaka noho ny fisotroana.
Ahoana ny fiasan'ny vitamina C?
Fomba fanamafisana izany. Ny vitamina C dia simika misy fihenam-bidy ka azo ovaina amin'ny klôro. Ny vitamina C dia afaka mampihena ny Cl2 ka hatramin'ny Cl-, izay ampidirina otrikaina ho lasa vitamina C vitamina irery. Ity fanehoan-kevitra ity dia tsy maintsy atao anaty rano, ary ny vokany dia tsy tsara amin'ny fanjakana matanjaka.
Azo soloina ny votoatin'ny sivana ao anaty akorany. Rehefa lany ny filan'ny sivana dia tsy mila solointsika fotsiny ny foton'ny sivana. Na izany na tsy izany, afaka mitsitsy vola sy hery be isika. Impiry no tokony hisolo azy io isika? Eny, miankina izany. Amin'ny ankapobeny, ny singa sivana iray dia afaka manome fanadiovana rano 6000L, izay azo ampiasaina ho an'ny fianakaviana dimy handro mandritra ny iray volana.
OEM azo alaina
Ity Modely ity no lovia lehibe vokarinay ao amin'ny orinasa. Nahazo marika izahay fa tsy nametaka azy. Satria manome OEM an'ity iray ity izahay, ao anatin'izany ny fanamboarana isan-karazany. Mampiseho prototypot izahay ary ny sisa amin'ny habaka dia avela ho an'ny eritreritrao, Logo, singa sivana sy akorandriaka, azo alain-tahaka daholo ny zava-drehetra. Raha tsy manana hevitra ianao dia manana ekipa mpamolavola anay hanoro anao izahay, mazava ho azy fa manana ny tahiry ihany koa izahay, azafady mametraka baiko raha tianao. Amin'izao fotoana izao dia nahazo mari-pankasitrahana MSDS sy SGS amin'ity maodely aseho eto ambany ity izahay. Misaotra anao amin'ny faharetanao, satria tonga eto ianao. ^^
Previous: Loha fandroana fibra vita amin'ny karbaona miavaka miaraka amin'ny sivana
Manaraka: Teknolojia vaovao seramika famafazana mineraly vita amin'ny seramika misy sivana
sivana fandroana fofona
sivana rano fandroana
Sivana amin'ny fandroana vitamina C
Fanasa-tànana voasivana amin'ny teknolojia avo lenta
Loha fandroana fibra vita amin'ny karbaona miavaka miaraka amin'ny sivana
Loha-pahefana mandro tanana mitsitsy rano
Cartridge sivana fandroana vitamina C Aroma Vitamin C
Lohatenan'ny orana mivatravatra orana i Chrome On / Off
Loha-pahefana ambony fandroana- nopetahany Chrome
Xuzhou Xinpaez fanadiovana rano
Orinasa voafetra Equippment